Yeyiphi imigaqo yococeko yococeko ekufuneka ilandelwe kwizitudiyo ze tattoo? | Ukuzoba
Yeyiphi imigaqo yococeko yococeko ekufuneka ilandelwe kwizitudiyo ze tattoo?
USusana godoy | | Iitatoo
Ngaba unazo ii studio ze tattoo, ukugqobhoza okanye usebenza kwimicropigmentation? Emva koko kufuneka uyazi imigaqo yezempilo yococeko efunekayo kwiziko ngalinye ukuze umsebenzi uhlale u-100% uqinisekisiwe. Asithandabuzi ukuba uyahambelana nawo onke amanyathelo, kodwa akuyongozi ukuwakhumbula nawo.
Baninzi abantu abaya kumaziko okubhala okanye kwizitudiyo ukuze babambe ubomi babo okanye iinkumbulo kulusu lwabo. Kodwa ukuze iziphumo zibe zezona zibalaseleyo kwaye phakathi awona manyathelo ezempilo afanelekileyoIziko kufuneka lilandele amanyathelo ambalwa ukuze sonke sihambe sonwabile ngomsebenzi owenziweyo kunye nokusingqongileyo ngokubanzi. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zintoni?
1 Yeyiphi imigangatho kunye nemilinganiselo yococeko ekufuneka yenziwe kwizitudiyo ze tattoo
2 Iindlela zokucoca kufuneka wazi
3 Wazi njani ukuba umzobi we tattoo uyayithobela imigangatho yezempilo
Yeyiphi imigangatho kunye nemilinganiselo yococeko ekufuneka yenziwe kwizitudiyo ze tattoo
Maninzi amanyathelo ekufuneka siwathathile, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, kufuneka siqale ngezona zisisiseko, ezicocekileyo, oko kukuthi, ukuze iziko lethu lihlale likhuselekile, asikwazi ukutsiba imimiselo yezempilo kunye nemithetho Kungenxa yokuba kuphela ngale ndlela kwaye sithathela ingqalelo zonke iimfuno zakho, siya kuba sinika ukhuseleko olukhulu kubo bonke abathengi bethu kodwa nakwiziqu zethu. Zithini ezo mfuno zisisiseko?
Sikumzuzwana wobomi bethu apho Ukuhlamba izandla zakho ngesepha kunye namanzi kubaluleke ngaphezu kokubaluleka. Ke ngoko, nakumaziko tattoo okanye kwizitudiyo kungaphezulu kwesiseko.
Emva kokuhlamba kunye nezandla ezicocekileyo ngokupheleleyo, siya kunxiba iiglavu. Oku kuya kuhlala kusetyenziselwa into enye.
Kwimeko apho sinoluhlobo oluthile lwesilonda, kufuneka siligqume kakuhle, nebhandeji ethi, ukuba kunokwenzeka, ingangeni manzi. Kodwa ukuba oku akunakwenzeka, kuya kuhlala kungcono ukuyihlehlisa iseshoni.
Emva kokusetyenziswa ngakunye, into leyo kufuneka ihambe ngenkqubo yokubulala iintsholongwane okanye ukubulala iintsholongwane.
Kuya kufuneka wongeze izinto ezikhuselayo ezinje ngezikrini, iigawuni okanye nayiphi na into ekhusela umculi we tattoo kodwa kunye nomthengi ngokwakhe.
Iindlela zokucoca kufuneka wazi
Emva kokubona ukuba ngawaphi amanyathelo aqhelekileyo ekufuneka siwathathe ekusebenziseni umsebenzi wethu, kufuneka sigxininise iindlela zokucocaukuya. Kwindawo yokuqala kuya kufuneka sibheje kwizinto ekuthiwa zii-asepsis ezijongana nendlela yokusebenzisa amanyathelo ococeko, ukuthintela ii-microorganisms ekufikeleleni kubomi bethu. Kodwa xa singazi ukuba zikhona okanye azikho, siza kubhenela kwi-antisepsis, eyona ndlela ichanekileyo yokucoca zonke izinto, kuba i-antiseptics ivela kuyo, ethi, njengesixhobo, ithi ndlela-ntle kwii-microorganisms ezifuna ukungena izixhobo zokusebenza.
Ke konke oku, ngococeko olufanelekileyo njengoko sisitsho, kunokugcinwa kulawulwa kakuhle. Ungalibali uku intsholongwane, kodwa kungekuphela ezo zixhobo kodwa kwanendawo osebenza kuyo (kanye ngemini ubuncinci) kunye nezinye iindlela ezinje ngezolula okanye ifanitshala oyisebenzisayo. Ngaphandle kokulibala inzalo, ekwayenye yeendlela zokugcina ucoceko kunye nokuthintela zonke iintlobo zebhaktheriya, ngakumbi izinto ezikufutshane neembumba. Amanyathelo kunye neenkqubo ekufuneka zenziwe ngononophelo!
Wazi njani ukuba umzobi we tattoo uyayithobela imigangatho yezempilo
Namhlanje akuyi kuba nzima ukufumana izitudiyo zetattoo ezihambelana ngqo nemilinganiselo kunye nococeko. Kuyinyani ukuba ezi ziyahlaziywa kwaye ke, bonke abaqeqeshi kufuneka bazazi. Kodwa ukuba ungumthengi, kungcono usoloko undwendwela iziko kwaye uqiniseke ngalo.
Ngokuqinisekileyo uya kufumana apho zonke izikhombisi ezinokubakho kunye neempawu eziqinisekisa imeko efanelekileyo. Ukuthetha nomculi we tattoo kuya kukunika nokhuseleko. Kufuneka ujonge ukuba zonke izinto kufuneka zenziwe iintsholongwane kwaye ziyalahlwa, ukongeza ekucoceni izandla nasekusebenziseni ukhuseleko olwaneleyo kubo nakuthi. Soloko uzibeke kwizandla ezilungileyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Yeyiphi imigaqo yococeko yococeko ekufuneka ilandelwe kwizitudiyo ze tattoo?
Iiflamingo tattoos kunye nentsingiselo yazo